Account Security အတွက် Strong Passwords ပြုလုပ်ထားပါ | Online Service Center Myanmar -->
Account Security အတွက် Strong Passwords ပြုလုပ်ထားပါ
"မိမိ Account Security အတွက် Strong(အကောင်းဆုံး) ဖြစ်စေမယ့် Passwords ပြုလုပ်ထားပါ"
Password ဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲအသုံးပြုဖို့အတွက်
လျှို့ဝှက်နံပါတ် or သော့တစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ် ဥပမာပေးရရင်
ကိုယ့်မှာ အိမ် ၁ လုံးရှိတယ် အဲ့ဒီ အိမ်ကိုဝင်ဖို့ထွက်ဖို့အတွက်
ကိုယ်ပိုင်သော့တစ်ချောင်း(Password) ရှိတယ်ဆိုပါတော့ သော့ကို
ကိုယ်က လုံခြုံအောင် ဘယ်သူမှ မသိအောင် သိမ်းဆည်းထားရပါမယ်
အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ လူတကာမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာ ထားထားလျှင်
ကိုယ်မသိခင် အလစ်မှာ အဲ့ဒီသော့နဲ့ဖွင့်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ထဲကို
ဝင်ချင်သလိုဝင် ထွက်ချင်သလိုထွက် လုပ်နိုင်ပါတယ် သို့မဟုတ်
ကိုယ့်အိမ်ကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်သွားနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့
Password ဟာ အိမ်သော့ တစ်ချောင်းနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူလို့
ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲပဲ သိအောင် လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားဖို့
ဒါ့အပြင် မိမိအသုံးပြုနေတဲ့သော့ကို ထုထည်ကြီးမားဖို့ အလွယ်တကူ
ဖွင့်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် ဖျက်ဆီးပြီးတော့ ဝင်ရောက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်
မလုပ်နိုင်အောင် အင်မတန်မှ ခိုင်ခံံ့တဲ့ အင်မတန်မှ မာကြောတဲ့
သော့အမျိုးအစားဖြစ်နေဖို့တော့လိုပါတယ် ကဲ... ဒီတော့..
ကိုယ့် Account ကို လုံခြုံဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုး
Password တွေပေးသင့်လည်းဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
တော်တော်များများက Password ကို အလွယ်တကူ ပြီးစလွယ်နဲ့
ပေးတတ်ကြတာများပါတယ် မိမိနာမည် မိမိချစ်သူခင်သူနာမည်
မွေးနေ့မွေးရက် အမှတ်တရနေ့ရက် မိမိဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ပဲ
ပေးတတ်ကြတာများပါတယ် အဲ့ဒီလိုပေးတာက Security ပိုင်း
ဆိုင်ရာအတွက်တော့ မကောင်းပါဘူး ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့
မိမိ Account ကို Hacked လုပ်ပြီး ခိုးယူမည့်သူက မိမိ ရဲ့
ပြီးစလွယ်ပေးထားတဲ့ Password ကို ခန့်မှန်းပြီး အလွယ်တကူ
ခိုးယူသွားနိုင်လို့ပါပဲ ဒါကြောင့် Password ကို ပြီးစလွယ်မပေးပါနဲ့။
Password ကို ဘယ်လိုတွေပေးသင့်လဲ....? ဆိုပါလျှင်...
မိမိ အသုံးပြုမည့် Password ထဲမှာ ~!@#$%^&*() အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ
ထည့်သွင်းအသုံးပြုလျှင် ခိုးယူမည့် Hacker ကလည်း အလွယ်တကူ
ခိုးယူလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး ဥပမာ သင့်နာမည်က Maung Phyu
ဆိုပါတော့ ဒါဆိုရင် မှတ်မိလွယ်ပြီး Strong ဖြစ်နိုင်မယ့် Password
ကို ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပြီး ပေးထားလိုက်လို့ရတာပေါ့။
M@ungPhyu ဒါဆိုရင် နာမည်အစဆုံးအလုံးကြီးပြီးaနေရာမှာ
@ ကိုအသုံးပြုလိုက်တာပါ နောက်ထပ် ဂဏန်းထပ်ဖြည့်လိုက်ရင်
အင်မတန်မှ မာကျောတဲ့ Strong ဖြစ်တဲ့ Password ဖြစ်သွားမှာပါ
ဘယ်လို ဂဏန်းထပ်ဖြည့်ရမှာလည်း ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရမှာလဲဆိုရင်
မိမိမွေးရက်၊ မိမိကိုင်ဆောင်နေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါ။
M@ungPhyu09123456789 အဲ့လိုပေးလိုက်ရင် Password ကို
မှတ်မိလည်း လွယ်မယ် Strong လည်းဖြစ်မယ် ဒါက နမူနာ အနေနဲ့
ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် မိမိဘာသာ ဉာဏ်ကွန့်ပြီး အကောင်းဆုံး
Password တစ်ခုဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပြီး ထားထားလိုက်ပါ
အဲ့ဒါဆိုရင် Hacker ကလည်း အလွယ်တကူ မခန့်မှန်းနိုင်တော့သလို
Hacker တွေ အသုံးပြုတဲ့ Password Cracker ( Word List ) တွေ
နဲ့လည်း မိမိ Account ရဲ့ Password ကို Crack ပြီး ရယူနိုင်တော့
မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံး အလုံခြုံဆုံး အမာဆုံး
သော့တစ်ချောင်းကို ဖန်တီးထားကြပါလို့ တိုက်တွန်း ရေးသားလိုက်
အောက်ကတော့ Facebook Security Team ကစာလေးပါ...
Myanmar Security Tip -- Strong Passwordsခိုင်မာ အားကောင်းတဲ့ စကားဝှက်ရှိတာဟာ သင့်ဖေ့ဘွတ်ခ်ကို ဘယ်သူမှ အလွယ်တကူ ဟက်ခ် လို့မရအောင် လုပ်ခြင်းရဲ့ ပထမအဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီမှာ ဘယ်လိုမျိုး ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ ပတ်စ်ဝေါ့ကို ရွေးချယ်ရမယ် ပြီးတော့ အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ထားရမယ် ဆိုတာလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံကောင်း တစ်ချို့ပေးထားပါတယ်။ https://www.facebook.com/…/how-to-keep-your-acco…/passwords/
ခိုင်မာ အားကောင်းတဲ့ စကားဝှက်ရှိတာဟာ သင့်ဖေ့ဘွတ်ခ်ကို ဘယ်သူမှ အလွယ်တကူ ဟက်ခ် လို့မရအောင် လုပ်ခြင်းရဲ့ ပထမအဆင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီမှာ ဘယ်လိုမျိုး ခိုင်မာအားကောင်းတဲ့ ပတ်စ်ဝေါ့ကို ရွေးချယ်ရမယ် ပြီးတော့ အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ထားရမယ် ဆိုတာလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံကောင်း တစ်ချို့ပေးထားပါတယ်။ https://www.facebook.com/…/how-to-keep-your-acco…/passwords/
မိမိတုိ့Facebook Account ေတြ Hack ခံထားရလုိ့
or Hack ခံရမှာကြောက်လို့ ကြိုတင် ကာကွယ်ထားချင်လို့
ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်များ OSC-Myanmar မွ
Hacked လုပ်ပြီး PA(Personal Attack) လုပ်ပြီး အရှက်ခွဲခံနေရသူများကိုတော့ အခမဲ့ အကူအညီပေးသွား
မည်ဖြစ်ပြီး အခြား Hack လုပ်ခံထားရသူများရဲ့
Account များကို Recovery လုပ်ပြီး ပြန်လည်ရယူချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
မိမိလည်းအသုံးမပြုချင်တော့ဘူး Hacked(ခိုးယူသွား)သူလည်း အသုံးပြုလို ့မရတော့အောင် ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Security Team မှ အကောင်းဆုံးနဲ့ အသက်သာဆုံးနှုန်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
Hacked လုပ် မခံရသေးတဲ့ Account ပိုင်ရှင်များအနေနဲ့လည်း
Security မြှင့်ချင်လျှင် မြှင့်ပေးပါတယ် အကောင့်ကို Security Checked လုပ်ပေးတယ် မသင်္ကာစရာ Web App, Game App, Other App Log တွေရှင်းပေးတယ် ကိုယ်ဝင်တာမဟုတ်ပဲ အခြားဆီတွေက ဝင်ထားတဲ့ Device, IP, Location Log တွေကို ရှင်းပေးတယ် Security မြှင့်ပေးတယ် Security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ တွေ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ သင်ပေးတယ်
Hack လုပ်မခံရအောင် Security အဆင့်တွေမြှင့်ပြီး ဘာတွေကို ဂရုပြုရမလဲ သတိထားရမလည်းဆိုတာတွေကို သင်ပေးတယ် ဘာတွေဆောင်ပြီးဘာတွေရှောင်ရမလည်းဆိုတာတွေ
မိမိတို့ OSC-Myanmar အနေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို အသက်သာသုံး နှုန်းဖြင့် ဝန်ဆောင်ပေးပါတယ်
ငွေကြေး အနည်းငယ်လေး ကုန်ကျမှာကို မြင်မနေပါနဲ့
Account Hacked လုပ်ခံရပြီး PA(Personal Attack) တွေလုပ်ခံရပြီး အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းတွေဖြစ်တော့မှ အဖေကယ်ပါ အမေကယ်ပါတွေနဲ့Security မြှင့်တာမှာ ကုန်ကျတာနဲ့ မကာမိတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်ပါမယ်
ဒါကြောင့် မိမိတို့ Account များကို Security မြှင့်ပြီး သုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Security မြှင့်တတ်ရင် မြှင့်ပြီးသုံးကြပါ
အကယ်၍ ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမသိဘူး အဲ့ဒီ ဝန်ဆောင်မှုကို ယူချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် OCS-Myanmar ကို သတိရလိုက်ပါခင်ဗျာ။ ^_^
Aung Kyaw Soe ( Founder - Online Services Center )
Video By : Facebook Security Team
Facebook Page => www.facebook.com/OSCMyanmar.mm
Website => www.osc-myanmar.com